Ngikuthola kanjani i-Oscdimg? - Amafayela
Main > Amafayela > I-Oscdimg exe download - ukuthola izixazululo
I-Oscdimg exe download - ukuthola izixazululo
Ngikuthola kanjani i-Oscdimg?
Uzodinga ukusebenzisa ithuluzi elingeziwe lomugqa womyalo weMicrosoft, obizwaI-Oscdimg. ...
Manje udinga ukuqala i-Prompt yakho yomyalo, engenziwa nge-Start-> Run bese ufaka i-'cmd 'ku-Prompt.
Sanibonani bafana, ngamukelekile futhi nangu uBernardo ovela ku-BTNHD futhi yebo ubuyekeze eyakho Windows 10 ADK enguqulweni yakamuva ka-2004 futhi uzama ukufaka esinye sezithombe zakho futhi uthola leli phutha elihlanya 5616 15299 Bheka i-BCD Boot EX -Bug mhlawumbe udidekile. Ungakhulumi ngenye yama-MDT gurus amahle kakhulu emhlabeni. John kusuka kuDeployment Research.COM ayibhalele ukuyilungisa ngethemba ukuthi iMicrosoft izoyilungisa inkinga ngokushesha okukhulu kepha kwazi bani.
Ngakho-ke ngizokukhombisa ukuthi ungayilungisa kanjani. Kulungile, namuhla inhloso ukulungisa le nkinga ngokuqinisekisa i-BCD-Boot-Ex kudeskithophu yami. futhi sivula, uzobona kwiskripthi esibheka enkombeni yezimpande zekhompyutha yendawo futhi sibheke uhlobo lwe-PE firmware.
Isitatimende se-if-and-iron esihlola ukuthi ngabe i-BIOS isethwe njenge-UEFI noma i-BIOS ejwayelekile nje ukuthi lo mbhalo lapha udinga ukukopishwa bese uphasiswa kufolda yemibhalo yesabelo sokuthunyelwa. Uma usuqedile ngalokho sidinga ukuvula ibhentshi lakho lokuthunyelwa bese ungena kulandelana lomsebenzi bese ukhetha ukulandelana komsebenzi odinga ukuwuthumela. Ngalesi sibonelo, manje sengizokhetha i-BTNHD yami Windows 10 x 64, ezongena esikhundleni sohlelo lokusebenza luka-1909.
Ngakho-ke ngiyichofoza kabili. Futhi ukusuka lapha siya kulandelana lomsebenzi. Futhi lo mbhalo othile udinga ukuba ngaphakathi kwefolda efakwe ngaphambili futhi ngaphakathi kwefolda yokufaka kuqala, uzobona enye ifolda ebizwa nje ngokuthi ikhompyutha entsha.
Manje udinga ukufaka lo mbhalo okhethekile ukuze usebenze phakathi kokuqinisekisa nefomethi nokwahlukanisa idiski ye-BIOS phakathi kwabo. Ngakho-ke sichofoza ku-Engeza ukuya kokujwayelekile futhi sizokhetha umugqa we-runcommand. Manje umugqa womyalo we-Run uzozifaka kufolda entsha yeComputeronly kuze kube sekupheleni, ngakho-ke ungadangali.
Ngakho-ke izinto ezimbalwa okufanele sizenze. Kufanele sishintshe igama okukuwe. Futhi n kufanele sisebenzise umugqa womyalo olandelayo.
Kulungile, ngakho-ke ngiyinike igama lokuthi Lungisa Ukutholwa kwe-UEFI futhi lo umugqa owodwa we-Command uma wenza lokho sikhetha ukusebenzisa umugqa wethu womyalo bese uchofoza umcibisholo ophezulu ukuwuguqula phakathi kokuqinisekisa nefomethi bese idiski yokuhlukanisa kufanele ilungile, eyesibili umyalo kufanele ube lapho, lapho wenza lokho kusebenza, kulungile, Manje lapho ngenza ushintsho ekulandelaneni kwami ​​nomsebenzi ngivame ukuthanda ukukhetha i-node yami ye-MDT Deploymentshare, ngiyichofoze kwesokudla, khetha i-Update Deployment Share, chofoza Okulandelayo lapha, Okulandelayo, bese ulinda Kulula bese kwenziwa ngokushesha ekupheleni kwemibhalo, hlala ubukele inqubo futhi, kuzoba nokuthunyelwa okuphumelelayo. Izosebenzisa iWindows 10 64 bit, 1909. Ngiyethemba uzoyithokozela le ndatshana Greatest of this guy, futhi ungayeki ukubuka, uzobona inqubo noshintsho olusha, futhi ngethemba ukuthi iMicrosoft izoyilungisa le nkinga, kwazi bani, jabula futhi ngizonifica nina kwesilandelayo.
Kuyini i-Oscdimg EXE?
I-Oscdimgiyithuluzi lomugqa womyalo ongalisebenzisa ukudala isithombe (. iso) lefayela le-32-bit noma i-64-bit eyenziwe ngokwezifiso ye-Windows Preinstallation Environment (Windows PE). Ngemuva kwalokho ungashisa i-. iso kwi-CD noma kwi-DVD.I-Oscdimgisekela izinhlelo zefayela ze-ISO 9660, Joliet, ne-Universal Disk Format (UDF).Kwangathi 2, 2017
Laba bantu abaphezulu kule ndaba ephekiwe futhi namhlanje ngifuna ukukukhombisa ukuthi ungaguqula kanjani ifayela lakho le-DVD Windows libe yifayela le-ISO bese ulisebenzisa ngokuhamba kwesikhathi, njengokushisa kudrayivu ye-ESP noma kumshini obonakalayo noma yini njalo nje udinga imibono embalwa futhi senziwe lula into yokuqala siqhubeka nokulanda leli fayela ngifaka isixhumanisi encazelweni ngicela nje ususe okungajwayelekile ku-athikili bese ungalanda ifayela kuyimpi nje encane ekuvumela ukuthi ulande umlilo onje uya phambili bese uqala umlilo bese ukopisha ifayili kule ndlela i-hard drive c windows system 32bit futhi sengivele nginamathisela eyodwa ngifuna ukukutshela ukuthi ngifuna ukukutshela ukuthi le mpi ayilona igciwane noma abanye abantu bacabanga ukuthi ivela kwaMicrosoft ukuze wena Ungalithola kamuva ifayili lapho uhlelo luzongena khona esikhundleni sefolda enkulu ngokushesha nje lapho ukopisha leli fayela uye kuleyo ndlela bese uyaqhubeka uwele lokhu bese uya kwi-DVD-Licksir yakho noma ngabe uyaxolisa ukuthi yi-Freddies ngesi-French I ngizokopisha ifayili nge-tha umkhombandlela uqhubeke nje ukhiye isihlalo nekhadi, wakhe ifolda bese uyisika winwin eziyisikhombisa yep bese unamathisela ifayela lapha sengikwenzile ukweqa isikhathi uma usukopisha leli fayela kulolo hlangothi ukunciphisa lokhu bese uqhubeka uvule ukuphawula okujwayelekile kwe-cmd nokusuka enhliziyweni vele ukopishe lokhu kuyo yonke le ncazelo engezansi kopisha konke lokhu qiniseka ukuthi leli lifana ncamashi negama lefolda oyisike ekhabetheni lakho ngikubone ufaka amafayela engiwasika ku-7 bese ngibhala izinwele uma uwusikhombisa uma uzibhala ngamawindi 7 vele ushintshe lokhu uwenze amawindi 7 bese uyashintsha futhi lapha ngakho-ke kopisha lokhu bese unamathisela u-S ie kulungile ku-CMD ar bese ulinda kuthatha isikhathi eside, kulula kakhulu ukugoqana ngoba sebenzisa inkumbulo yesistimu noma uhlelo noma ukulungiswa usetshenzisiwe kule nqubo ngakho-ke kuzothatha isikhathi eside ngakho-ke ngiyasheshisa i-athikili manje ngaso sonke isikhathi ngakho-ke ukuguqulwa sekuyizikhali manje, amaphesenti ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ayenziwe, umlilo ungomunye manje, ngakho-ke asihambe kule nkomba lapho sifaka khona umlilo ngaphakathi, siwuguqula ube yile l ocal bheka idiski. Ngakho-ke ngizothola ukuthi iFayili lapha ilingana namafayela e-DVD, ngamagigabhayithi amabili, iyafana, ngakho-ke ake sibheke ukuthi lokhu kuyasebenza noma cha uma ufuna ukushisa kwi-USB drive, ungasebenzisa le software. Ngiphakamisa ukuthi ukhethe lena ibizwa nge-USB Universal ESP engahluziwe Faka isixhumanisi encazelweni engezansi uma ufuna ukuqala umlilo faka i-ESP yakho, khetha iWindows 7 futhi yebo, vele uvuthe njengezintamo ezinhle futhi Uthole futhi udinga Idrayivu ye-ESP noma uma usemshinini obonakalayo ngizokukhombisa ukuthi umlilo uyasebenza bese uyahamba nomshini wakho obonakalayo bese ulandela noma yini, vele uwufake kimi ungafuni ukuthi kuchitheke isikhathi esiningi ngakho-ke ngethemba lokuthi uthokozile okokufundisa kwami ​​okusheshayo ungakhohlwa ukubhalisela ukwabelana nabanye ukuthi sikubona kanjani ngokuzayo lokhu ozokubuka
Ngiyakha kanjani i-ISO ngisebenzisa i-Oscdimg?
Ngingalitholaphi ifayela le-oscdimg.exe?
Landa lapha. Landa ifayela le-.zip bese ulikhipha. Bese usika bese unamathisela ifayela le-Oscdimg.exe kusiqondisi sakho se-C: WindowsSystem32. 2. Manje udinga ukuqala umyalo we-Prompt yakho, ongenziwa nge-Start- & gt; Run bese ufaka u-'cmd 'ku-Prompt.
/ Ungasebenzisa i-oscdimg nefayela le-ISO 9660?
Ithuluzi le-Oscdimg ne-Microsoft Windows image mastering API (IMAPI) isekela amafomethi amathathu ohlelo lwamafayela: i-ISO 9660, i-Joliet, ne-UDF. Izinketho ze-ISO 9660 azikwazi ukuhlanganiswa nezinketho ze-Joliet noma ze-UDF. Ubude begama lefayela buhlanganiswe nobude besandiso segama lefayela abukwazi ukweqa izinhlamvu ezingama-30 kusistimu yefayela le-ISO 9660.
Kungani ngithola iphutha lesikhathi sokusebenza ku-oscdimg?
Amaphutha we-Runtime angamaphutha we-MiniTool Partition Wizard Free Edition avela ngesikhathi 'sokusebenza'. Isikhathi sokusebenza sichaza kahle; kusho ukuthi la maphutha we-EXE adalwa lapho i-oscdimg.exe izanywa ukulayishwa noma ngabe iMiniTool Partition Wizard Free Edition iqala, noma kwezinye izimo isivele isebenza.
Ngingayakha kanjani iDVD bootable ngisebenzisa i-oscdimg?
Ungasebenzisa ithuluzi le-Oscdimg ukudala i-CD noma i-DVD ebhuthalwayo ngokusebenzisa okufakwayo kwama-boot amaningi. Uma wenza lokhu, qaphela okulandelayo: Okukhethwa kukho i-bootdata kufanele kulandelwe ngenani lokufakiwe kwe-boot kumyalo (-bootdata: & lt; number & gt;). Ukufakwa ngakunye kwama-multi-boot kufanele kuhlukaniswe ngokusebenzisa uphawu lwe-hash (#).
nika amandla ukudwebela kwesinqamuleli
Nika amandla ukudwebela kwesinqamuleli - uphendula imibuzo
Yini iwizadi yokwabelana? Ukwakha isabelo esisha kuseva yakho yefayela lenethiwekhi, usebenzisa i-New Share Wizard. Ukuze ibe wusizo, iseva yefayela kufanele inikele ngesabelo esisodwa noma ngaphezulu - amafolda aqokelwe ukutholakala esidlangalaleni ngenethiwekhi.
ayikwazi ukufaka i-directplay
Angikwazi ukufaka i-directplay - sesha izixazululo
Kungani isikhombisi sami silokhu sizungeza? Isizathu esiyinhloko sokuthi kungani lo mbuthano ohlaza okwesibhakabhaka ojikelezayo uvela eceleni kwesikhombi sakho segundane kungenxa yomsebenzi obonakala sengathi uhlala usebenza ngemuva futhi ungavumeli umsebenzisi ukuthi enze umsebenzi wabo ngokushelelayo. 2021
fsx memory fix
Ukulungiswa kwememori ye-Fsx - ungaxazulula kanjani
Ngiyikopisha kanjani i-URL yelabhulali? Esipheqululini sewebhu, vula umtapo wezincwadi ofuna ukuwuvumelanisa. Chofoza inkambu yekheli bese ukopisha i-URL. Namathisela i-URL kusuka kusiphequluli ungene ku-OneDrive yomsebenzi noma isikole lapho ithi Namathisela i-URL yakho yelabhulali lapha, bese uqhafaza Vumelanisa manje.
(c) 2021 thespeedcube.com. Wonke Amalungelo Agodliwe.